Akhri Galmudug oo amaro kusoorogtay Wariyayaasha iyo milkilayasha Hotelada | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Akhri Galmudug oo amaro kusoorogtay Wariyayaasha iyo milkilayasha Hotelada
Wasaarad Arrimaah Gudaha Maamulka Galmudug ayaa goor dhow warqad ay soo saartay waxaa ay Amar ku siisay Wariyaasha Magaalada Cadaado ku sugan in aysan tabin karin warar aysan ogeyn Madaxtooyada Galmudug.
taas oo halis ku ah wariyaasha Madaxa Banaan ee u shaqeeyay Idaacadaha Maxaliga iyo kuwa caalamiga ah wariyaashaas oo had iyo jeer laga rabo warar xaqiiqo ah maadaama xiisad siyaasadeed ay ka jirto Magaalada Cadaado.
Sidoo kale warqada ayaa waxaa ku qoran Amar kale oo la siinayo Milkiilayaasha Hoteelada Magaalada Cadaado ku yaal ku waas oo looga digayo in Aan hoteeladooda lagu qaban karin shir aysan la socon Madaxtooyada Galmudug.
Warqada Ka soo baxday Wasaarada Arrimaha Gudaha Galmudug ayaa Digniin loogu diray Dadka qaban qaabiya Banaanbaxyada aysan ogeyn Madaxtooyada Galmudug iyadoo loogu goodiyay in talaabo laga qaadi doono cidii amarkaasi jabisaa.
Waxaa sii xoogeysanaya Xiisada Siyaasadeed ee ka taagan Magaalada Cadaado iyadoo dadka ku sugan magaalada ay ka baqanayaan in arrintan ay ka dhalato xiisad colaadeed oo sababta gacan ka hadal.